एक पछि अर्को नेताले छोड्दै दाहाल-नेपालको साथ्, २ ब`रिष्ठ नेता नै फर्किए ओली तिर ! – चितवन मिडिया
एक पछि अर्को नेताले छोड्दै दाहाल-नेपालको साथ्, २ ब`रिष्ठ नेता नै फर्किए ओली तिर !
काठमान्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरोधीलाई साइजमा ल्याउन तिनका पनि विरोधीलाई च्याप्न थालेका छन् । उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सिराहामा झण्डै चुनाव हराएका लिलानाथ श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाए ।
प्रचण्डलाई चितवनमा चुनावी टक्कर दिने विक्रम पाण्डेलाई पनि ओलीले नजिक बनाइ~सकेका छन् । पाण्डे विगतमा चितवनबाट चुनाव जित्न सफल भएका थिए ।
निर्माण व्यवसायी पाण्डेलाई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले निकट ल्याएकाछन् । चुनाव भइहाले प्रचण्ड`विरुद्ध पाण्डेलाई सहयोग गर्ने रणनीति समेत बनाइएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा रेनु दाहालसँग मेयरका प्रतिष्पर्धी देवी ज्ञवालीलाई पनि ओलीले अवसर दि`एका छन् । मतपत्र च्यातिएपछि पुनः मतगणना हुँदा ज्ञवाली झीनो मतान्तरले दाहालसँग पराजित भएका थिए । यो प्रकर~णले निकै चर्चा कमाएको थियो ।
यसैगरी, नेकपा दाहाल(नेपाल पक्षधरका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि अप्ठ्यारो पार्न ओलीले रणनीति बनाएका छन् । उनले माधव नेपालको गृहजिल्ला रौतहटमा उन~लाई कमजोर पार्न प्रभावशाली नेताहरुलाई नजिक ल्याएका छन् ।
रौतहटका प्रभावशाली नेता प्रभु साहलाई ओलीले मन्त्री बनाएर आफ्नो साथमा ल्याइसकेका छन् । विरोधीका विरोधीलाई साथमा लिई अप्ठ्यारोमा पार्ने ओलीको रणनीति खुल्दै गएको छ । उनले खोजी खोजी प्रचण्ड र माधव नेपालका विरोधी~लाई अवसर दिन थालेका छन्
सुर्य चिन्ह बारे यस्तो भन्छन प्रचण्ड
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक स्थायित्वका लागि पार्टी एकता गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण उपलब्धि नै खतरामा पर्न लागे~को बताएका छन् ।
गृहजिल्ला चितवनमा पत्रकारहरूसँगको अन्तक्र्रियामा प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा परेको औल्या`एका हुन् । ‘हामीले विडम्बनापूर्ण स्थितिको सा`मना गरिरहेका छौँ, यो दुर्भाग्य हो ।
जसले गणतन्त्रको आन्दोलनमा यो हुनै सक्दैन भन्यो, त्यसको हातमा गणतन्त्रको नेतृत्व गयो । समावेशीता, समानुपातिक हुनु हुँदैन भन्ने मानिस नेतृत्वमा हुँदा जनता`सँग गरिएको प्रतिवद्धता धरापमा परेको छ
प्रचण्डले भने ‘ओली सुध्रिए होलान् भनेर एकता गरिएको थियो, तर उनी उस्तै रहेछन् । सबै लोक`तन्त्रवादी, संविधानका पक्षधर प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा रहेको उनले बताए ।
उनले भने ‘केपीको समूह बाहेक सबै दल, नागरिक समाज, मिडिया प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलो`कतान्त्रिक भन्नेमा एकमत छन् । जो नेपाल ट्रष्ट र नेपालीको हित चाहन्छन, उनीहरू सबै प्रतिनिधिसभा विघटन सच्याउनुपर्छ भन्नेमा छन् ।’
ओलीसँग भएकामध्ये ९० प्रतिशत प्रतिनि~धिसभा सदस्य पनि विघटनको विपक्षमा रहेको प्रचण्डको दाबी छ । ‘उहाँहरू`लाई बोल्न गाह्रो भएको छ । गुटमा भएपछि अप्ठ्यारो हुँदोरहेछ ।
ओलीसँग भएकामध्ये ९० प्रतिशत प्रतिनिधि~सभा सदस्य पनि विघटनको विपक्षमा रहेको प्रचण्डको दाबी छ । ‘उहाँहरूलाई बोल्न गाह्रो भएको छ । गुटमा भएपछि अप्ठ्यारो हुँदोरहेछ ।
यद्यपि उहाँहरूलाई बर्वाद भयो, खत्तम पार्नुभयो, केपी ओलीले देश डुबाउनुभयो भन्ने चै भएको छ । घात भएको छ भन्ने सबैलाई नै लागेको छ ।अदालतले जनभावना र संविधानको मर्म बुझेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने प्रचण्डको विश्वा~स छ ।
बहुमतलाई सूर्य चिन्ह
प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि अहिले~को संघर्ष नभएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘म प्रधानमन्त्रीको दाबा गरेर लडेको हैन । राष्ट्र र जनता, संविधान र लोकतन्त्रको निम्ति, धेरै ला~मो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका निम्ति लडेको हो ।
उनले संकट समाधान गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको बताए । ‘मैले शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी र जसपाका नेताहरूसँग कुरा गरिराखेकै छु । केही सम`यभित्र संयुक्त आन्दोलन हुने छ ।
असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदममार्फत अहिलेकै स्थितिमा चुनाव भए त्यो पनि अलोकतान्त्रिक र असंवै`धानिक नै हुन्छ । अहिलेको समस्यालाई चुनावले समाधान नगर्ने उनको दाबी छ । उनले भने ‘अहिलेको समस्यालाई चुनावले समाधान गर्दैन ।
यदि चुनाव भएमा देश अराज`कताको भुमरीमा फस्छ । दक्षिणपन्थी र वामपन्थी अतिवाद हाबी हुन्छ । संविधान मिच्ने, लोकतन्त्र मिच्ने काममा नेपाली चुप लागेर बस्दैनन् । कतै न कतैबाट आन्दोलनमा जान्छ ।’ यद्यपि आफू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा नै रहने उ`नले स्पष्ट पारे ।
उनले निर्वाचन आयोगले सूर्य चिह्न कसैलाई नदिने गरेर ‘फ्रिज’ गर्न नपाउने समेत बताए । ‘निर्वाचन आयोग आफैले ४ सय ४१ नै केन्द्रीय कमिटी हो भनेको छ । निर्वाचन आ`योग कसैको गोटी हुँदैन । त्यसकारण आयोगले पार्टीको बहुमतलाई मान्यता दिनुपर्छ । र त्यही हुन्छ ।’प्रहार न्युज
पक्राउ परेका दिनेशको बयान : सडक’बाट धक्का दिँ’दा खोल्सोमा लडी, अनी घाँ’टी थि’चेर मा’रिदिए
प्रधानमन्त्री ओली र जापानी राजदूत मासामिची साइगोल`बीच बिदाइभेट